Madaxweyne Xasan Sheekh & Madaxweynihii hore oo kulan gaar ah yeeshay | dayniiile.com
Home WARKII Madaxweyne Xasan Sheekh & Madaxweynihii hore oo kulan gaar ah yeeshay
Waxa xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ku soo dhamaaday kulan ay yeesheen Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha xafiiska baneynaya ee Maxamed Cabdillahi Farmaajo.
Sida illo wareedyo ka tirsan Madaxtooyada ay sheegeen labada Madaxweyne ayaa ka wadahadlay sida ugu suurta galsan ay u dhici lahayd xil wareejinta xafiiska Madaxweynaha, iyadoo la isla gartay in si degdeg ah loo magacaabo Guddi arintaasi ka shaqeeya, oo uu hoggaamin doono Agaasimaha Madaxtooyada Maxamed Cabdillaahi Ciise.
Madaxweynaha cusub oo hadda degan hoteel ku dhaw garoonka Aden Cabdulle ayaa la filayaa in todobaadka dambe uu u guuro Villa Soomaaliya, halkaas oo lagu qaban doono munaasabad uu xilka si rasmi ah ugala wareegi doono Madaxweyne hore Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
Ka hor la wareegitaanka Villa Somalia ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa uu sii wadi doonaa wadatashiyada kala duwan, iyada oo laga sugayo in uu soo Magacaabo Ra’iisul Wasaarihii bedeli lahaa Maxamed Xuseen Rooble.
Previous articleCiidamada ATMIS & kuwa dowladda oo dib ula wareegay Ceelbaraf
Next articleVilla Somalia oo dhambaalo Hambalyo ah u guddoontay Madaxweyne Xasan Sheekh
Deni 65 masugayo wax u kordha in ay wax kahayaamaan mooyee
Safiirka xilka kasii dagaya ee safaaradda Soomaaliya ee Roma oo iska...
Waardiyihii hore ee kaamka dowaladii Nazi-ga oo magaciisa lagu sheegay Josef...
Ciidamada Ruushka oo si buuxda gacanta ugu dhigay magaalo ku taal...